Ohm's Law: မင်းသိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
အကယ်၍ သင်သည်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လောကတွင်စတင်နေပြီဆိုလျှင်လူသိများသောအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုသင်အမှန်ပင်ကြားခဲ့ဖူးသည် အုန်းရဲ့ဥပဒေ။ ဒီဟာကဒီနိယာမမှာအခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမနည်းနိူင်ပါဘူး။ ၎င်းသည်လုံးဝမရှုပ်ထွေးပါ။ ၎င်းသည်မည်မျှအရေးပါသည်ကိုအများအားဖြင့်အစတွင်သင်ယူလေ့ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုမသိသေးသောအစပြုသူအချို့ရှိနေသေးသည်။
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာသင်လုပ်ပါလိမ့်မယ် သင်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာပါ ဒီအိုး၏ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ သင်လေ့လာရမည့်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည် လက်တွေ့ applications များစသည်တို့ ပိုပြီးလွယ်ကူစေရန်လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ရေသို့မဟုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တို့အကြား ပို၍ အလိုလိုသိသောနှိုင်းယှဉ်မှုကိုပြုလုပ်မည်။
2 Ohm's Law ဆိုတာဘာလဲ?
2.1 Ohm ၏ဥပဒေလျှောက်လွှာများ
မစတင်မီသင့်တွင်လျှပ်စစ်စနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာသိစေချင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အခြားစနစ်များထက်ရှုပ်ထွေးပြီး ပို၍ စိတ္တဇဆန်နေပုံရနိုင်သည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်တစ်ခုကဲ့သို့သင်အရည်အမျိုးမျိုးရှိသည့်နေရာတွင်စီးဆင်းသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းလုပ်ခဲ့ရင်ကော စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေ့ကျင့်ခန်း အီလက်ထရွန်တွေရဲ့အီလက်ထရွန်တွေကရေလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ကသင့်အားမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အခြေခံကျသောနည်းများဖြင့်အရာများအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒီအတွက်ငါနှိုင်းယှဉ်မယ် တ ဦး တည်းလျှပ်စစ်နှင့်တ ဦး တည်းဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်။ ဤနည်းကိုသင်စတင်မြင်ယောင်လာပါက၎င်းသည် ပို၍ ပင်အလိုလိုသိလာလိမ့်မည်။
insulatorဖြေ - ရေစီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်စေတဲ့ဒြပ်စင်တစ်ခုအကြောင်းမင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်။
လျှပ်စစ်မီး: ဒါဟာလျှပ်ကူးစီးဆင်းမှုကလျှပ်ကူးစီးဆင်းမှုတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကပြွန်ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ရေစီးဆင်းမှုတစ်ခုလို့မြင်နိုင်တယ်။
ဗို့အားဆားကစ်တစ်ခုမှစီးဆင်းရန်ဗို့အားသည်အချက်နှစ်ချက်အကြားအလားအလာကွာခြားမှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ရေစီးဆင်းစေလိုသည့်အချက်နှစ်ခုကြားရှိအဆင့်ခြားနားချက်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဗို့အားကိုပြွန်အတွင်းရှိရေ၏ဖိအားဟုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။
ခုခံခြင်းဖြေ - သူ့ရဲ့အမည်ကအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းဒါဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုကိုခုခံသည်၊ သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်အတွင်းရှိဆည်မြောင်းရေပိုက်၏အဆုံး၌လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုထည့်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။ ထိုကြောင့်ဂျက်လေယာဉ်မှထွက်လာပြီးရေဖိအား (ဗို့အား) တိုးလာစေသည်။
ပြင်းထန်မှု: လျှပ်စစ်စပယ်ယာမှဖြတ်သန်းသွားသောပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်စီးဆင်းမှုသည်ပြွန်တစ်ခုမှဖြတ်သန်းသွားသောရေပမာဏနှင့်ဆင်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြွန်တစ်ခုသည် ၁ intensity (ပြင်းထန်မှုနိမ့်) ဖြစ်ပြီးနောက်ပြွန်တစ်ခုသည် ၂ ဒီဂရီ (ပိုမိုမြင့်မားသောပြင်းအား) ကိုဤအရည်နှင့်ပြည့်စေသည်။
၎င်းသည်သင့်အားနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ဟုထင်စေနိုင်သည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်အတူ:
တစ် ဦး ကဆဲလ်, ဘက်ထရီ, ဒါမှမဟုတ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဒါကရေစမ်းရေကန်လိုပဲ။
Transistor, relay, switch ...- ဤထိန်းချုပ်မှုကိရိယာများကိုသင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်အသာပုတ်အဖြစ်နားလည်နိုင်သည်။
ခုခံခြင်း- ရေပိုက်၏အဆုံး၊ ဥယျာဉ်ထိန်းညှိ / နင့်စသည်တို့စသည်တို့ကိုသင်၏လက်ချောင်းဖြင့်နှိပ်သောအခါ၎င်းသည်သင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ရဖို့ဒီအပိုင်းမှာပြောထားတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားနိုင်တယ် အခြားနိဂုံးချုပ်။ ဥပမာ:
အကယ်၍ သင်သည်ပိုက်၏အပိုင်း (ပြင်းအား) ကိုတိုးမြှင့်ပါကခုခံမှုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည် (Ohm's Law -> I = V / R) ကိုကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ပိုက်အတွင်းရှိခုခံအားကိုတိုးမြှင့်ပါက (ခုခံမှု) ရေသည်တူညီသောစီးဆင်းနှုန်းနှင့်အတူမြင့်မားသောဖိအားများဖြင့်ထွက်လာသည် (Ohm's Law -> V = IR) ကိုကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်ရေစီးဆင်းမှု (ပြင်းထန်မှု) သို့မဟုတ်ဖိအား (ဗို့အား) ကိုတိုးမြှင့်ပြီးဂျက်လေယာဉ်ကိုသင့်ဆီသို့ညွှန်ပြလျှင်၎င်းသည် ပိုမို၍ ပျက်စီးစေနိုင်သည် (ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသောလျှပ်စစ်ရှော့ခ်) ။
Ohm's Law ဆိုတာဘာလဲ?
La အုန်းရဲ့ဥပဒေ ၎င်းသည် current ၏ပြင်းထန်မှု၊ တင်းမာမှု (သို့) ဗို့အားနှင့်ခုခံမှုတို့ဖြစ်သည်။ ဆားကစ်၏လည်ပတ်မှုနိယာမများကိုနားလည်ရန်အခြေခံကျသောအရာတစ်ခု။
၎င်းကိုဂျာမန်ရူပဗေဒပညာရှင်၏ပထမဆုံးတီထွင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ဂျော့ခ်ျအုန်း။ သူသည်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်တွင်ပုံသေ linear ခုခံမှုမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းသောလျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည်၎င်းကို ဖြတ်၍ လျှောက်ထားသောဗို့အားနှင့်အချိုးညီမျှမှုရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငါ = V ကို / R.
သူများသုံးခုပြင်းအား ပုံသေနည်း ၄ င်းတို့အနေဖြင့် voltage နှင့် voltage နှင့်သက်ဆိုင်သော voltage နှင့်သက်ဆိုင်သော voltage နှင့်တွက်ချက်မှုကိုတွက်ချက်ရန်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး voltage နှင့် voltage အား function တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းတွက်ချက်နိုင်သည်။ အမည်:
ငါ = V ကို / R ကို
V ကို = IR
R ကို = V ကို / ငါ
I သည် amperes တွင်ဖော်ပြထားသော circuit ၏ current ပြင်းထန်မှု၊ Volts တွင်ဖော်ပြထားသော voltage သို့မဟုတ် voltage နှင့် R သည် ohms တွင်ဖော်ပြထားသော voltage ကို V ။
por ejemploသင့်တွင် 3A သုံး၍ 20v တွင်အလုပ်လုပ်သောဆီမီးခွက်ရှိသည်ဆိုပါစို့။ သင်အသုံးချနိုင်သောခုခံမှုကိုတွက်ချက်ရန်။
R ကို = 20/3
အ Ohm ၏ဥပဒေလျှောက်လွှာများ ၎င်းတို့သည်အကန့်အသတ်မရှိ ဖြစ်၍ ဆားကစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောပြင်းအားသုံးခုကိုရရှိရန်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကို၎င်းတို့ကိုအသုံးချနိုင်ခြင်း။ ဆားကစ်များသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသော်ငြားလည်းဤဥပဒေကိုကျင့်သုံးရန်လွယ်ကူစေသည်။
သူတို့တည်ရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည် နှစ်ခုခြွင်းချက်အခြေအနေများ circuit တစ်ခုအကြောင်းပြောသောအခါ Ohm's Law အတွင်းမှဖြစ်ပြီး၊
တိုတောင်းသောဆားကစ်: ဤအခြေအနေတွင် circuit နှစ်ခု၏လမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်သွယ်သောအခါ conductor နှစ်ခုကြားဆက်သွယ်မှုရှိသော element တစ်ခုရှိသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် current သည် voltage နှင့်ညီမျှပြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုလောင်ကျွမ်းခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောအခါအလွန်အစွန်းရောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပွင့်လင်းဆားကစ်switch သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသုံးပြုခြင်းဖြင့် circuit တစ်ခုပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ် conductor အချို့ဖြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ circuit ကို Ohm's Law ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါက၎င်းသည်အဆုံးမဲ့ခုခံမှုရှိကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်လျှပ်စီးစီးဆင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်ဆားကစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမထိခိုက်စေပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ပွင့်လင်းသော circuit ၏ကြာချိန်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
အခြေခံ Ohm's Law တွင်ပမာဏ၏မပါဝင်ပါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား, လျှပ်စစ်ဆားကစ်အတွက်၎င်း၏တွက်ချက်မှုများအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် voltage နှင့်ပြင်းထန်မှု (P = I · V) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Ohm's Law ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ရန်ကူညီနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပညာရေး » Ohm's law: မင်းသိထားသင့်သမျှ